The Holy Bible, Easy Reading Version, in Nepali उपदेशक 1
1 यी उपदेशकका वचन हुन्। उपदेशकहरू दाऊदका पुत्र यरूशलेमका राजाका थिए।
2 उपदेशकको भनाइ छ; सबै थोक व्यर्थैका छन र अकारथ छ* सबै थोक … अकारथ छ मूलमा जो हिब्रू शब्द छ त्यसको अर्थ हुन्छ “वाफ” वा “सास” वा कुनै यस्तो थोक जसको कुनै काम छैन, जुन खालि छ, गलत छ र समयको बरबादी छ। अर्थात् सब कुरा व्यर्थ छ।3यस जीवनमा मानिसहरू जुन किसिमले मेहनत गर्छन्, त्यसबाट तिनीहरूलाई साँच्चै कुनै लाभ हुन्छ र?
चीजहरू साँच्चै नै परिवर्तन हुदैन
4 एउटा पिँढी आउँछ र जान्छ तर संसार चलिरहन्छ।5सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ तर भोलिपल्ट त्यसै ठाँउबाट उदाउनलाई फेरि हतारिन्छ।
6 हावा दक्षिणतिर बहन्छ र यो उत्तरतिर पनि बहन्छ। हावा एक ठाउँदेखि अर्कोमा बहन्छ अनि त्यहीं फेरी फर्केर जहाँबाट बहेको थियो त्यहीं आउँछ।
7 सबै नदीहरू एकै तिर बगिनै रहन्छन्। ती सबै समुद्रमा आएर मिसिन्छन्। तर पनि समुद्र कहिल्यै भरिँदैन।
8 शब्दले वस्तुहरूको पूरा वर्णन गर्न सक्दैन।† शब्दले वस्तुको … सक्दैन शाब्दिक “सबै शब्द (वस्तु) कमजोर छन्।” मानिसहरू र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्दैनन् तर पनि मानिसहरू बोलि नै रहन्छन्।‡ मानिसहरू … रहन्छन् हिब्रूको यो वाक्य “मानिस बोल्न सक्दैनन्” भनेर पनि अनुवाद हुनसक्छ। शब्द हाम्रो कानमा बारम्बार परिरहन्छन्, तर तिनले हाम्रो कान भरिंदैनन्। हाम्रा आँखाले, जे-जति पनि देख्छन्, तीबाट कहिल्यै अघाउँदैनन्।
नयाँ भन्ने कुरा केही छैन
9 शुरू देखि जुन कुरो जस्तो छ, त्यस्तै नै छ। जस्तो भएर आइरहेको छ सबै थोक त्यस्तै रहिरहन्छ। यस जीवनमा नयाँ भन्ने केही छैन।
10 कसैले भन्न सक्छ, “हेर, यो कुरो नयाँ रहेछ।” तर त्यो धेरै अघि देखि थियो, त्यो त हामी भन्दा पनि पहिले भएको थियो।
11 धेरै अघि घटेका कुराहरू मानिसहरू याद गर्दैनन् र अहिले घटेका कुराहरू भविष्यमा पनि याद गर्दैनन्। त्यस पछि पनि ती अरू कुराहरूको याद राख्दैनन् जुन उनीहरू भन्दा अघिका मानिसहरूले गरेका थिए।
के बुद्धिबाट आनन्द पाइन्छ?
12 म, जो अहिले प्रचारक हुँ, एक समयमा यरूशलेममा इस्राएलको राजा थिएँ। 13 मैले निश्चय गरें, यस जीवनमा जे कुरा हुन्छ, त्यसलाई बुझ्न आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्दै त्यसलाई अध्ययन गर्छु। मैले बुझे, परमेश्वरले मानिसहरूलाई गर्नु भनी जुन कुराहरू दिनुभयो त्यो खुबै कठिन रहेछ। 14 सबै कामहरू जुन यो पृथ्वीमा गरें मैले तिनीहरूमाथि हेरें र देखें कि यी सबै व्यर्थका हुन्। यो ठीक त्यस्तै हो जस्तो हावालाई पक्रनु।§ यो ठीक त्यस्तै … हावालाई पक्रनु अथवा, “यसले मलाई (मनलाई) दुखित तुल्याउँछ।” दुखितको अर्थ “इच्छुक” पनि हुनसक्छ र मनको अर्थ “हावा” पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् पद 17 पनि। 15 तिमी ती कुराहरूलाई बदल्न सक्दैनौ। यदि कुनै कुरो टेढो छ भने त्यसलाई तिमीले सोझो बनाउँन सक्दैनौ र यदि कुनै वस्तुको अभाव छ भने तिमीले त्यसलाई भर्न सक्दैनौ।
16 मैले आफैंलाई भनें, “म खुबै बुद्धिमान् छु। म भन्दा अघि यरूशलेममा जति पनि राजाहरूले राज गरे, म ती सबै राजाहरू भन्दा अधिक बुद्धिमान् छु। म जान्दछु वास्तवमा बुद्धि र ज्ञान के हो?”
17 मैले यो पनि जान्ने निश्चय गरें कि मूर्खता पूर्ण चिन्तन भन्दा विवेक र ज्ञान कसरी श्रेष्ठ छन्। तर मलाई ज्ञान भयो विवेकी बन्ने प्रयास पनि त्यस्तै रहेछ जस्तो हावालाई पक्रने प्रयासगर्नु। 18 किन कि अधिक ज्ञानले त्यसै हतासा उब्जँदो रहेछ। जसले अधिक ज्ञान प्राप्त गर्दछ उसले त्यतिनै दुख पनि प्राप्त गर्दछ।
*1:2: सबै थोक … अकारथ छ मूलमा जो हिब्रू शब्द छ त्यसको अर्थ हुन्छ “वाफ” वा “सास” वा कुनै यस्तो थोक जसको कुनै काम छैन, जुन खालि छ, गलत छ र समयको बरबादी छ।
†1:8: शब्दले वस्तुको … सक्दैन शाब्दिक “सबै शब्द (वस्तु) कमजोर छन्।”
‡1:8: मानिसहरू … रहन्छन् हिब्रूको यो वाक्य “मानिस बोल्न सक्दैनन्” भनेर पनि अनुवाद हुनसक्छ।
§1:14: यो ठीक त्यस्तै … हावालाई पक्रनु अथवा, “यसले मलाई (मनलाई) दुखित तुल्याउँछ।” दुखितको अर्थ “इच्छुक” पनि हुनसक्छ र मनको अर्थ “हावा” पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस् पद 17 पनि।